Play စတိုး၊ Instagram စသည်ဖြင့်မှောင်မိုက်တဲ့ mode ကိုဘယ်လိုဖွင့်ရမလဲ Androidsis
ကျွန်တော်တို့ Androidsisvideo channel သို့တင်ထားသောယခင်ဗီဒီယိုတွင်၊ Google Play Store မှာအမှောင်စနစ်ကိုအတင်းအကျပ်အတင်းအကျပ်ခိုင်းစေရအောင်။ ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့, ဤမျှလောက်များစွာသောစကားပြောလျက်ရှိသည်နှင့်လက်တွေ့အားဖြင့်မည်သူမျှမစွမ်းဆောင်နိုင်သေးသည့်အမှောင်ထုသည် ဂူဂဲလ်ပလေးမှနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းကိုထည့်သွင်းထားခြင်းပင်။
ဒီဗီဒီယိုပို့စ်ရဲ့အကြောင်းပြချက်က Play Store တွင်မှောင်မဲသည့်စနစ်ကို enable လုပ်နိုင်သည့်ထိရောက်သော 100 x 100 ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုသင့်အားပြပါ ဒါ့အပြင် Instagram နဲ့ Google Photos ပေါ်မှာဖွင့်တာအပြင် ဤအမှုအလုံးစုံတို့ကိုသူကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာတဲ့မှတ်ချက်မှကျေးဇူးတင်စကား Lidia Roldán ၏မှတ်ချက်များအတွက် Androidsisvideo youtube channel.
ဖြေရှင်းနည်းသည်ရိုးရှင်းပါသည် Android အတွက်လုံးဝအခမဲ့ application ကို download လုပ်ယူပါ ၎င်းသည်အလုပ်တစ်ခုကိုကလစ်တစ်ချက်တည်းဖြင့်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။
လျှောက်လွှာကိုရိုးရှင်းစွာခေါ်သည် အမှောင် Mode ကို, သင်တစ် ဦး အမြစ်တွယ်အသုံးပြုသူဖြစ်ရန်မလိုအပ်ပါ သို့မဟုတ်ထိုကဲ့သို့သောအရာတစ်ခုခုကိုရုံလျှောက်လွှာကိုဖွင့်နှင့်ထဲကနေကိုရွေးပါ အလင်းစနစ်၊ အမှောင်စနစ်သို့မဟုတ်အလိုအလျောက်စနစ်.
Light mode သည် Play Store ကို၎င်း၏အဖြူရောင်ဗားရှင်းသို့ပြန်ပို့ပေးလိမ့်မည်။ ၎င်းသည် Android terminal အသုံးပြုသူအားလုံးနီးပါးတရားဝင်တရားဝင်ရှိသည်။
ဒုတိယ option, Dark mode or Play Store မှ Dark Mode ကိုအလိုအလျောက်ချက်ချင်းဖွင့်ပေးလိမ့်မည် နှင့် Instagram နှင့် Google Photos ကဲ့သို့အပလီကေးရှင်းများ။
နောက်ဆုံးအလိုအလျှောက် mode သည်ကျွန်ုပ်တို့၏ပထဝီဝင်geographicalရိယာ၏အချိန်နှင့်လိုက်လျောညီထွေဖြစ်လိမ့်မည် ကျွန်ုပ်တို့သည်နေ့အချိန်၌ဖြစ်စေ၊ ညအချိန်ဖြစ်စေဖြစ်စေဤအပလီကေးရှင်းများ၏သုံးစွဲသူမျက်နှာပြင်၏အရောင်ကိုလိုက်လျောညီထွေဖြစ်အောင်ပြုလုပ်ပါ.
ဒါဟာလွယ်ကူပြီးအခြားရွေးချယ်စရာသို့မဟုတ်ခေါင်းကိုက်ခြင်းမရှိဘဲ! ငါသည်ဤလျှောက်လွှာကိုငါဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်း, ဤလိုင်းများအောက်တွင်ဖော်ပြထားသောငါစွန့်ခွာသော link မှအခမဲ့ Google Play Store ကနေအခမဲ့ download လုပ်နိုင်ပါတယ်။
Play Store မှ Dark Mode ကိုအခမဲ့ download လုပ်ပါ (ROOT မလိုအပ်ပါ)
အမှောင် Mode ကို
ရေးသားသူ: ဂျူလီယန် Eggers
ဒီပို့စ်ရဲ့အစမှာငါချန်ထားခဲ့တဲ့ပူးတွဲဗီဒီယိုကိုကြည့်ဖို့သတိရပါ၊ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲဒီမှာအပလီကေးရှင်းကဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဘယ်လောက်ရိုးရှင်းသလဲဆိုတာကိုပြတယ်။ Google Play စတိုး၊ Instagram နှင့်ဂူဂဲလ်ဓာတ်ပုံများတွင်အမှောင်စနစ်ကိုသက်ဝင်စေပါ.
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android application များ » Play Store, Google Photos နှင့် Instagram တို့မှာရှိပြီးသားမှောင်မိုက်တဲ့ mode ကိုသင် enable လုပ်နိုင်ပါတယ်